Date My Pet » 5 Antony Nahoana Breakfast Dates Voalohany ve Brilliant
Last nohavaozina: Jan. 20 2021 | 2 min namaky
Tsindry ambany ry zareo:
Fihaonana maraina dia midika fa ny zavatra andrasana ho ny "zava-dehibe" ny daty mety ho toy ny kely dia kely araka izay azo atao eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Sarotra inoana fa na ny dia hahatsapa hafahafa loatra na tena any amin'ny mitsahatra mahatsiaro tena, sakafo maraina-mifantoka trano fisakafoanana, toy ny tena fotoana ny sakafo maraina dia nentim-paharazana iray izay nisy raharaha manan-danja ambany. Na izany aza, tsy tahaka ny fihaonana fotsiny ho kafe, sakafo maraina daty nosoratanao manome kokoa naorina-in fahafahana mahazo ny mahalala ny quirks ny hafa. Mianatra na ireo tahaka ny ketchup atody ny fihetseham-pony momba ny pancakes vs waffles, sakafo maraina manome daty mora "handeha-mba 'hiresaka lohahevitra rehefa aminareo tsy mahita izay holazaina.
Tsy misy na inona na inona mitranga fanantenan'ny rehefa
Na ny manontany tena raha hisy fanasana ny daty ny trano na ny alina avy miara-manadihady ny tanàna, sakafo hariva niaraka daty Matetika tamin'ny tsy fahazoana antoka momba ny / marina ny alina rehefa hifarana. Amin'ny sakafo maraina daty, etsy ankilany, ny fotoana farany dia afaka mora foana ho anjarany koa nomanina mialoha. Raha ny tena izy, dia mety ho anisan'ny fametrahana ny daty voalohany fotoana. Ohatra, nilaza ny sakafo maraina amin'ny 9am daty mety koa ny miaraka amin'ny ny fitenenana mahazatra, "Efa nahazo ny lalao Golf Nikasa ny 11;"Atỳ, ianareo samy ny daty dia in-the-mahafantatra momba ny ela ny daty haharitra. Ankoatra izany, miresaka tsirairay ny drafitra ho an'ny sisa ny andro iray hafa mety ho mora "handeha-ho" lohahevitra amin'ny resaka am chomp teo amin'ny mofomamy sy gravy.
Manana mora-ny-olo-malaza-avy fomba fitafy
Mifidy ny akanjo ho daty voalohany dia mety ho zavatra mihoatra kozatra-wracking tsy misafidy ny zavatra avy amin'ny fitafiana ho an'ny asa fanadihadiana. No mianatra voalohany momba ireo zava-dehibe isalasalana fa, fa nahafantatra avy ny dressy na mahalana vao tokony ho ny fahatsapana voalohany niaraka matetika no mahatonga ny tsy ilain'ny fihenjanana ho an'ny antoko rehetra anjara. Amin'ny sakafo maraina, na izany aza, akanjo ka betsaka no azo antoka fa avy amin'ny fanontaniana. Raha mampiseho ao sweats sy ny T-shirt dia azo inoana fa tsy nisy drafitra tsara na, sakafo maraina daty mbola nosoratanao mibaiko ny aina, tsotsotra (fa mendrika) fomba fitafy.
Mety ho somary lafo
Tsy toy ny sakafo hariva daty izay mety hiezaka ny volavolan-dalàna avy amin'ny appetizers ny zava-pisotro ho entrees amin'ny tsindrin-tsakafo, sakafo maraina dia efa datin'ny antoka mba ho tsara tarehy somary takatry ny amin'ny toerana indrindra. Antoka, ampiana-ons ny volavolan-dalàna dia mety ahitana nandidy kafe na ranom-boasary na opting noho ny voankazo lafiny salady raha tokony ho ny tenifototra browns, fa ankapobeny, sakafo maraina daty somary mora ny milaza ny vidin'ny. Izany dia avo roa heny ho an'ny Bonus anao sy ny daty: Dia tsy handeha Nopotehina amin'ny ratsy mety daty voalohany, ary izy / izy tsy hanamelo-tena ianao mandany vola nidangana be nitsena azy / azy.
Ry zareo no tompon-daka atao ...
Ok, ka io dia mety ho kely ny mihinjitra, fa fikarohana mampiseho fa salama mihinana sakafo maraina amin'ny fotoana tsy tapaka dia mifandray amin'ny ankapobeny kokoa ny fahasalamana sy ny fitomboan'ny vintana ho afaka hanatratra tanjona levitra. Raha ny tena izy, iray amin 'ireo "toro-hevitra tsara indrindra" fa hatao nanomboka tamin'ny levitra dia mahomby dia ny mihinana sakafo maraina isan'andro. Izany dia noho ny fihinanana sakafo maraina dia tsy matsiro fotsiny izany hanombohana ny andro, fa izay koa ny fomba miavaka mba handaka-manomboka ny metabolism avy amin'ny fifadian-kanina ny alina fomba. Raha tsorina, manasa ny daty ny sakafo maraina dia fomba lehibe ny hoe, "Hey, Aho olona izay miahy ny fahasalamana, ary mety fotsiny miahy anao koa!"
3 Tips To Mampiaraka Vanim-potoana nandritra Exam
12 Tsy maintsy Haves Fa Mrs. Right
Ahoana no Isorohako ny Conversation Maty Zone sy Hitandrina avy namely Out?